मोटोपन घटाउन के गर्ने ? - Sainokhabar
होमपेज / स्वास्थ्य / मोटोपन घटाउन के गर्ने ?
प्रविधिले फड्को मारेको २१ औ शताब्दीमा खानपिनको व्यवहारले भने त्यही अनुपातमा फड्को मारेको देखिँदैन । समय यति व्यस्त भइदियो कि ! हामी आफ्नो स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्न पनि भ्याइरहेका छैनौँ । जसका कारण दैनिक विभिन्न समस्याहरूबाट गुज्रिरहेका छौँ । त्यसमध्ये मोटोपन सबैभन्दा धेरै चिन्ता र चासोको विषय बनेको छ ।
मोटोपन अर्थात भुँडी लाग्ने समस्याले अहिले धेरै मानिसलाई सताइरहेको देखिन्छ । पश्चिमी संस्कारमा रुमल्लिने हाम्रो बानीले पनि कताकता यो समस्याले सताएको हो कि भन्ने देखिन्छ । यस्तै समस्याको कारण मुटुका रोग, डाइबेटिज तथा विभिन्न अरु स्वास्थ्य समस्या आउन सक्छन् ।
हामीले खानपानमा कति ध्यान दियौँ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । मोटोपन घटाउन कस्ता खानेकुरा खाने भन्ने बारेमा हामीले ध्यान दिन सकेका छैनाँै ।
हावार्ड विश्वविद्यालयको एक अनुसन्धान अनुसार १२ वर्षका किशोरीहरूले आफ्नो खानामा रेसादार खानेकुराहरू बढाएपछि उनीहरूको तौल २५ प्रतिशत घटेको पाइयो । त्यस्तै आफ्नो खानामा २ दिनसम्म दैनिक रूपमा फाइबर (रेसा) बढाएमा १० प्रतिशत शरीरले लिने ऊर्जा घट्छ । ४ महिनाभित्रमा २ केजीसम्म तौल घट्ने एक अध्ययनले देखाएको छ । त्यसैले पनि फाइबरयुक्त वा रेसा भएको खानेकुरा मोटा मानिसहरुका लागि धेरै नै लाभदायी रहेको पाइएको छ ।
के हो रेसादार खानेकुरा ?
बोटबिरुवाका भागहरू जुन हाम्रो शरीरमा पच्दैनन् र अवशोषित हँुदैनन्, त्यस भागलाई रेसा भनिन्छ । रेसा भएको फललाई नै रेसादार खानेकुरा भनिन्छ । पशुपंक्षीबाट आउने खानाहरू (जस्तै, माछा, मासु, दूध, दही, आदि) भन्दा बोटबिरुवाबाट पाइने फल (स्याउ, नासपाती, बदाम, जौ, सागपात) मा धेरै फाइबर (रेसा) पाइन्छ । त्यसैले जति धेरै बोटबिरुवाबाट पाइने फलहरू खाइयो, त्यति नै धेरै हाम्रो शरीरले फाइबर पाउँछ ।
हामीले कस्तो खालको फाइबर खाइरहेका छौँ भन्ने बारेमा पनि जानकारी हुन आवश्यक देखिन्छ ।
क) इनसोलुबल फाइबर (पानीमा घुल्न नसक्ने )
ख) सोलुबल फाइबर (पानीमा घुल्न सक्ने)
यी दुवै प्रकारका फाइबर हाम्रो शरीरका लागि बराबर महत्वपूर्ण छन् । प्रायः मोटोपन घटाउने कुरामा भने सोलुबल फाइबर नै उपयुक्त मानिन्छ । सोलुबल फाइबरले कसरी मोटोपन घटाउन मद्दत गर्छ ।
क) सोलुबल फाइबरले भोक लगाउने हार्मोन जस्तै ग्रेलीनको मात्रा घटाउँछ भने अघाउने हर्मोनहरू (जस्तै कोलेसिस्टोकाइनिन, जीएलपी (१, पेपटाइड वाइवाइ) को उत्पादन बढाउँछ र यसरी लामो समयसम्म अघाउने र भोक नलाग्ने भएपछि हामी धेरै खाँदैनौँ अनि मोटोपन घटाउन मद्धत गर्छ ।
ख) सोलुबल फाइबरले क्यालोरीको मात्रा बढ्न दिँदैन । फाइबर हाम्रो शरीरमा नपच्ने भएकाले यसबाट हामीले कुनै ऊर्जा पाउँदैनौ । त्यसैले धेरै फाइबरले खानाको मात्रा बढाए पनि क्यालोरीको मात्रा भने बढ्न दिँदैन ।
ग) हाम्रो आन्द्रामा रहेको सहयोगी र उपयोगी ब्याक्टेरियाले सोलुबल फाइबरलाई थोर बहुत पचाउन सक्छ । यो टुक्र्याउने र पचाउने प्रक्रियालाई फरमेन्टेसन भनिन्छ । यो प्रक्रियामा छोटो चेनको फ्याटी एसिड बन्छ । जसले बोसो टुक्र्याउने गति बढाउँछ भने शरीरमा बोसो सञ्चयको मात्रा कम गर्छ । यसरी मोटोपन घटाउन सकिन्छ ।
घ) सोलुबल फाइबरले बोसो घटाउनुका साथै कोलेस्टेरोल (नराम्रो कोलेस्टेरोल) घटाउन मद्दत गर्छ । तर फाइबरयुक्त खाना खाइरहँदा पानी पनि त्य ित्तकै खानु जरुरी छ किनभने फाइबरले पानीसँग छिटो काम गर्न सक्छ ।
अन्नः जौ, दाल, मटर, चना, सिमी
सागसब्जीः ब्रोकाउली, बन्दा, कुरिलो
फलफूलः स्याउ, नासपाती, सुन्तला, कागती, एभोकाडो
सोलुबल फाइबरले मोटोपन घटाउँछ भन्दैमा, एकैचोटिमा धेरै खानु पनि राम्रो मानिँदैन । धेरै खाएमा पेट दुख्ने, पेट फुल्ने, पखाला लाग्ने जस्ता समस्या देखा पर्छन् । त्यसैले यसलाई बिस्तारै आफ्नो शरीरलाई ख्यालमा राख्दै उपभोग गर्दा राम्रो मानिन्छ ।
युएस डिपार्टमेन्ट अफ एग्रिकल्चरका अनुसार पुरुषले दैनिक ३० देखि ३८ ग्राम र महिलाले दैनिक २१ देखि २५ ग्राम फाइबर उपभोग गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्थात् हामीले दैनिक ५ पटक खाना खान्छौँ भने एक पटकमा पुरुषले कम्तीमा ६ ग्राम फाइबर र महिलाले ५ ग्राम फाइबर खान जरुरी देखिन्छ ।
क) फलफूल र सागपात धेरै खाने र खाँदा धेरै नताछी खाने
ख) बोक्रा बिनाको पोलिस दालभन्दा बोक्रासहितको पोलिस नगरिएको दाल खाने
ग) सेतो पोलिस गरिएको चामलभन्दा खैरो र पोलिस नगरिएको चामल प्रयोग गर्ने
घ) रोटीका लागि मैदाभन्दा आँटा प्रयोग गर्ने
ङ) फलफूलको जुसभन्दा ताजा फलफूल खाने
च) खाजामा जङ्क फुडभन्दा ताजा फलफूल र धेरै फाइबर भएका अन्नहरू खाने ।